UMax Payne Mobile, uvuselela umdlalo wokuqala kwi-Android | I-Androidsis
Max Payne, umcuphi onobundlobongela kwimidlalo yevidiyo, wabuya nayo yonke into kwizizukulwana ezizayo ngokududuza ngeMax Payne Mobile entsha ye-Android. Le nguqulo intsha yeRockstar lulungelelwaniso lomdlalo wokuqala, okhutshwe kwiPC, kwaye ugcina bonke ubuntu, isenzo kunye nobundlobongela kwesinye sezihloko ezaye zadumisa uhlobo lwamapolisa amnyama kwiPC. Ngoku kuguqulelo lwe Android umdlalo ngemizobo top-notch.
Enye yezona zinto zimelwe kakhulu nguMax Payne kwi-PC, kwaye eye yahlengahlengiswa kwimfezeko kwinguqulelo yayo yeselfowuni, sisiphumo esikhethekileyo Imbumbulu-Ixesha. Ukudubula komdlalo wesenzo somntu wesithathu kuqhelekile, kodwa xa sisebenzisa amandla akhethekileyo eBhulethi-Ixesha ixesha liyacotha kwaye sinokuchaneka ngakumbi kwinjongo xa sizama ukuphelisa iintshaba.
Ibali likaMax Payne lilungiselelwe ukugqibelela, njengoko sibukele umzabalazo wendoda wokucoca igama lakhe kuhambo lokuziphindezela ngokubulala umfazi wakhe nentombi. Isihloko esihambelana ne-Android 2.2 nangaphezulu silungiselelwe iifowuni eziphathwayo kunye neetshipsi ze-NVIDI Tegra 3, kwaye kwinqanaba lomzobo libonelela ngophuculo kubume, isisombululo segraphic kwi-HD kunye nolawulo olwenziwe ngokwezifiso.
Ubunzima obuphambili ekuguqulweni kukaMax Payne yayikukuhlengahlengisa ulawulo, kodwa kwi Max Payne Iselfowuni Siya kuba nakho ukonwabela ukusebenza ngokugqwesileyo kubuchwephesha bokuchukumisa ukuze amava omdlalo abe kamnandi nkqu nakumda wolawulo oboniswe kwisixhobo esiphathwayo.
Enye into kaMax Payne Mobile yimilo yayo ebalisayo, kunye nezinto zomdlalo ohlekisayo waseNyakatho Melika ngombala omnyama nomhlophe. Ibali, indala kwaye ligcwele ukuthandabuza kunye nokumangalisa, linzulu kakhulu kwaye ngoku singayidlala kwiselfowuni ngenqanaba lokuqala lomzobo kunye nenqanaba lokuziqhelanisa elithembeke kakhulu kuhlobo lwantlandlolo.
Eyona ndlela ibalaseleyo yokubuyela emgceni nesaga kaMax Payne ngaphambi kokudlala iMax Payne 3 kwi-Xbox 360, iPC okanye i-PlayStation 3. UMay Payne Mobile sisihloko esenziwe licandelo elikhethekileyo kwimidlalo ephathekayo ye Inkampani yeRockstar, kunye nenkxaso epheleleyo yabadali bokuqala, kwakhona kwakhona umcuphi onobundlobongela kwimidlalo yevidiyo ebuyayo.
Ngaba ukhe wadlala nasiphi na isihloko kwiMax Payne uthotho? Ngoku sinethuba lokudlala noMax kwakhona kwi-adventure apho kungayi kubakho kunqongophala kokudubula, ukusweleka kunye nokwenza iyelenqe phakathi kwamagosa onyanzeliso lomthetho.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ubungakanani bokugqibela beFantasy, eyona ndima ifanelekileyo iza kwi-Android
Ikhonkco - Ukuhlaziywa kweefowuni
Khuphela - Max Payne Iselfowuni
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » UMax Payne Mobile, umcuphi weza kwi-Android
alexander baos sitsho
Lo mdlalo ulunge kakhulu andikadlalisi kodwa ngaphezulu kokujonga umfanekiso owuqondayo 😉
Phendula i-alexander baos